सात वर्षदेखि केहि नखाई बाँचेको अनौठो जीव – Janamukhi.com
विश्वमा केहि यस्ता अनौठा जीव पनि छन् जसको विशेषताका बारेमा जानेर जो कोहि आश्चर्यमा पर्ने गर्दछन् ।केहि यस्ता जीव छन् जो कैयौ दिनसम्म केहि नखाई पनि बाच्न सक्दछन् । आज हामी यस्तै एक दुर्लभ जीवका बारेमा चर्चा गर्नेछौ । जो केहि नखाई केहि दिन वा महिना मात्र होइन कैयौं बर्षसम्म जीवित रहन सक्दछ ।
दक्षिण पूर्व यूरोपको देश बोस्निया र हर्जेगोविनामा पाइने सेलामण्डर नामक एक जीव पानी भित्रका गुफामा पाइने गर्दछ । यो जीव करीब ७ बर्षभन्दा बढि समयदेखि आफ्नो ठाँउबाट हल्लिएको समेत छैन । अर्थात ७ बर्षदेखि यो जीव केहि नखाई बाँचिरहेको छ ।
वैज्ञानिकका अनुसार सेलामण्डरको छाला र अविकसित आखाँका कारण यो अन्धो हुन्छ । सायद यहि कारणले पनि यो जीव आफ्नो ठाँउबाट नहल्लिएको हो । जबकी ७ बर्षसम्म एकै स्थानमा नहल्लीकन बस्नु अत्यन्त कष्टकर हुन्छ ।
सेलामण्डर आफ्नो पुरा जीवन पानी भित्रै बिताउने गर्दछ । यसको उमेर १ सय बर्ष हाराहारीको हुने गर्दछ । यो जीव जुन गुफामा बस्दछन् त्यहाँ उनीहरुको भोजन हत्तपत पाइदैन । जसका कारण केहि नखाई पनि सेलामण्डर वर्षाैसम्म जिउँदो रहन सक्दछन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
जनमुखी संबाददाता6700 posts0comments
स्तन क्यान्सरको खतरा कसलाई बढी हुन्छ ?
मोटोपनले चिन्तित बनाएको छ ? पालना गर्नुहोस् यी ६ कुरा